Mareykanka oo Dowladda Somaliya kula taliyay inay magacawdo Cumar C/rashiid | Radio Baidoa
Guriga Wararka Idaacada Mareykanka oo Dowladda Somaliya kula taliyay inay magacawdo Cumar C/rashiid
Mareykanka oo Dowladda Somaliya kula taliyay inay magacawdo Cumar C/rashiid
Dowladda Mareykanka, ayaa waxay dhigeeda Somaliya u soo jeedisay in Ra’iisal Wasaaraha cusub ay u magacawdo Dr. Cumar C/rashiid Cali Sharmarke, oo hadda ah Danjiraha Somaliya u fadhiya dalkaasi.
Dhambaal qoraal ah oo Mareykanka uu soo gaarsiiyay Madaxtooyada Magaalada Muqdisho, ayaa wuxuu ku sheegay in Dowladda Somaliya uu u soo jeedin lahaa, magacaabidda Dr. Cumar C/rashiid.
Mareykanka, ayaa tani ku macneeyay mid soo afmeeri karta khilaafka ragaadiyay Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaarihiisa. Sidoo kale Mareykanku waxa uu ninkaasi u arkaa mid Somaliya gaarsiin kara sanadka 2016-ka.
Qoraalka waxaa kaloo lagu sheegay in Madaxda Mareykanka ay is arkayn Cumar C/rashiid, isla-markaana ay u garteen mid si wanaagsan ula jaan qaadi kara Dowladda Xasan Sheekh Maxamuud.
Mareykanka, ayaa ku waramaaya in Cumar C/rashiid ay kula dardaarmeen in si dhab ah uu ula shaqeeyo Dowladda Federalka, haddii Madaxweynuhu uu go’aansado in uu ka dhigo Wasiirka 1-aad ee Xukuumada bedeleysa Dr. C/weli Sheekh Axmed Maxamed.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa la soo sheegayaa in uu go’aansaday in Dr. Cumar uu u magacaabo Ra’iisal Wasaarihiisa cusub, waxaana suurta gal ah in ilaa galabta la soo magacaabo.
Twitter-ka Dowladda Somaliya, ayaa waxaa lagu shaaciyay in Madaxweynuhu uu saacadaha soo socdo ku dhawaaqi doono Ra’iisal Wasaaraha cusub, laakiin laguma sheegin in Cumar C/rashiid loo magacaabaayo iyo in kale.